Fatin-dehilahy roa teny Andravoahangy sy 67 Ha : ny iray matin’ny aretina, ny faharoa nisy namono | NewsMada
Fatin-dehilahy roa teny Andravoahangy sy 67 Ha : ny iray matin’ny aretina, ny faharoa nisy namono
Raha voalaza fa aretina no nahafaty ity lehilahy iray, mpibata entana eny Andravoahangy, hitan’ny olona nitsitra teny an-dalana, omaly, noho ny daroka nahazo azy kosa no fantatra fa nahalavo ny lehilahy iray hafa, mpanasa fiara, eny amin’ny 67 Ha, ny alahady teo.
Rangahy iray mpibata entana no hita faty teny amin’ny tsenan’Andravoahangy, omaly maraina. Teo ambonin’ny talantalana iray teny an-tsena no nahitan’ny olona azy. Niely vetivety ny feo fa nisy namono izy io. Nitangorona ny olona sy ny mpiasa eny an-toerana. Tonga teny an-toerana ny polisy sy ny dokotera nizaha ny razana ka fantatra tamin’izany fa maty noho ny tazovona ilay rangahy. “Efa omaly izy io no nitaraina ho narary an-doha. Tsy nampoizinay ny fahafatesany tampoka teo”, hoy ny olona mahafantatra azy io.
Araka ny fanazavana ihany, efa hatramin’izy 15 taona no efa mpibata entana eny Andravoahangy. Avy any Fandriana izy ary tsy misy tsy mahafantatra azy ny eny Andravoahangy. “Tsy fahita ety aminay ny tazovona izany, ary tsy mbola nisy ny maty tamin’izany”, hoy ny mponina eny Andravoahangy. Mandeha ny resaka fa mety vokatry ny loto sy ny fakobe miparitaka eto an-drenivohitra ny anton’ny aretina tahaka izao. Etsy andaniny, tsy nahazo fitsaboana ilay rangahy ary nahenoana fofon-toaka tao am-bavany rehefa nozahan’ny mpitsabo.
Amin’ny ankapobeny, samy miaiky ny rehetra fa mety vokatry ny loto noho ny fiparitahan’ny fako no mitarika ny olona harary ka tonga amin’ny fahafatesana toy izao. Mitaraina ny olona noho ny fisavovon’ny fako eny Andravoahangy, izay mety hiteraka aretina hahafaty ny hafa ihany koa.
Rangahy hita faty teny 67ha, 9 lahy voasambotra
Fatin-dehilahy iray mpanasa fiara sy mpiambina fiara no hitan’ny mponina teny 67 ha, ny alahady maraina teo. Nahazo antso ny polisy misahana ny ady heloka bevava sakelika fahadimy (BC5) Anosy, ny alahady maraina, nilaza fa misy lehilahy iray maty mitsirara amin’ny tany eny amin’ny 67ha ambadiky tranom-piantohana Ny Havana akaikin’ny CEG Betsimitatatra 67ha. Rehefa tonga teny an-toerana ny BC5, nahita fa nisy nidaroka no nahafaty ilay lehilahy sahabo ho 30 taona satria nisy mangana ny tarehiny, nahitana dian- kiraro ny tratrany, ary feno ratra ny tavany sy ny lohany. Tamin’ny fanadihadiana nataon’ny polisy tamin’ireo manodidina no nahalalana fa andiana tovolahy maromaro efa mamo niaraka avy any amin’ny Bar B26 no nifanena tamin’io olona maty io tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany maraina.
Nila vaniny tamin’ilay rangahy izy ireo ary namely totohondry nisesisesy sy fingana avy hatrany ka nahalavo ilay lehilahy. Rehefa nianjera ilay rangahy, mbola nohitsahina sy nodakana ihany ka nitarika ny fahafatesany teo no ho eo ihany. Navelany teo fotsiny ilay olona rehefa maty fa izy ireo kosa, lasa nandeha nitsoaka. Nandeha avy hatrany ny fikarohana ireo nahavanon-doza ka tovolahy sivy izay samy monina eny amin’ny manodidina eny no voasambotra, ny andro iny ihany. Mbola misy namany hafa karohina no nahavanon-doza, ary atolotra ny fampanoavana anio izy sivy lahy.